दाङका युवाले ‘होलबडी’ स्यानिटाइजर उपकरण बनाएर अस्पतालको गेटमा निशुल्क जडान गरिदिए « Postpati – News For All
दाङका युवाले ‘होलबडी’ स्यानिटाइजर उपकरण बनाएर अस्पतालको गेटमा निशुल्क जडान गरिदिए
बैशाख १, दाङ । दाङ घोराहीका केही युवा मिलेर स्यानिटाइजर स्प्रे गर्ने स्वचालित उपकरण निर्माण गरेका छन् ।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ तुलसीपुर चोक निवासी २७ वर्षीय ‘युवा वैज्ञानिक’का रुपमा परिचित मार्सल रोकाको नेतृत्वमा निर्मित स्वचालित उक्त उपकरण राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको गेटमा जडान गरिएको छ।
विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट जोगाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले प्रतिष्ठानको गेटमा निशुल्क स्वचालित स्यानिटाइजर स्प्रे उपकरण जडान गरिदिएका हुन्।
प्रतिष्ठानको गेटमा सो टनेल जडान गर्नु पूर्व त्यसको जाँच प्रतिष्ठानका चिकित्सक र प्राविधिक टोलीले गरेको थियो। उपकुलपति डा. संगिता भण्डारीले नै उपकरण जाँच गरेकी थिइन्।
रोकाले भने ‘जाँचपछि उहाँहरु विश्वस्त भएर मात्रै जडान गर्न अनुमिति दिइएको हो।’ झन्डै डेढ लाख मूल्य पर्ने स्यानिटाइजर टनेल आफूहरुले मानवीय सेवाको दृष्टिले निशुल्क प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराएको रोकाले जानकारी दिए।
मेल्टा टेक्नोलोजीमा आवद्ध युवाहरुले मिलेर २४ घन्टामै उक्त उपकरण निर्माण गरेको रोकाले बताए। ‘डिजाइन सबै मेरो हो,’ रोकाले भने ‘हामी दश जना १८/१८ घन्टा काममा खटियौं र दुई/दुई घन्टा मात्रै सुतेर २४ घन्टामै टनेल निर्माण सकेका हौं।’
रोकाकै शब्दमा कोरानाको संक्रमणबाट जोगिन पुरै शरीर स्यानिटाइज गर्नु अति आवश्यक छ। तर त्यस्तो मेसिन नेपालमा हालसम्म कतै थिएन। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको गेटमा जडान गरिएको स्यानिटाइजर टनेलले कम लिक्विइडबाट धेरै मानिसलाई स्प्रे गर्न सकिने रोकाले बताए। जति मानिस आवतजावत गरेपनि त्यसले स्वचालित रुपमा आफैं स्प्रे गर्ने काम गर्छ।
रोकाका अनुसार गेटमा जडान गरिएको स्यानिटाइजर टनेलको सेन्सरले मान्छे आउनासाथ स्प्रे गर्न सुरु गर्छ र पाँच सेकेन्डमै बन्द हुन्छ। रोकाकाअनुसार प्रतिष्ठानको गेटमा जडान गरिएको स्यानिटाइजर टनेल झन्डै ६ फिट चौडाइ, ८ फिट उचाइ र १० फिट लम्बाइको छ।
जसमा दुई पाङ्ग्रे साधनहरु मोटरसाइकल, स्कुटर पनि प्रवेश गराउन मिल्छ। तर, टनेलभित्र प्रवेश गर्नु पूर्व हेलमेट निकाल्दै र हात केहीमाथि उठाउँदै गए शरिरको सबै भागमा स्प्रे हुन्छ। स्थानीयस्तरमै उपलब्ध सामानहरु प्रयोग गरेर मेसिन निर्माण गरिएकाले खराबी आउनासाथ तुरुन्तै मर्मत गर्न सकिने रोकाले बताए।
मेसिनमा प्रयोग हुने औषधि पनि स्थानीयस्तरमै उपलब्ध हुने बस्तुको प्रयोगबाट बनाइएको छ। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, एलोभेरा लगायतका स्थानीय वस्तुहरु समेतको मिश्रणबाट लिक्वीड निर्माण गरिएकाले मानव छालालाई कुनैपनि असर नगर्ने रोकाले बताए।
रोकाले बजारमा पाइने अलकोहलवाला स्यानिटाइजरभन्दा आफूहरुले निर्माण गरेको औषधि सस्तोमा पाइने जानकारी दिए। एक लिटरको मूल्य ५० रुपैयाँ जति पर्ने उनले जानकारी दिए।
रोकाले यसअघि नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतले गरेको नाकावन्दीको समयमा इन्धनको अभाव पूर्ति गर्न सल्लाको खोटोबाट पेट्रोल निर्माण गरेर मोटरसाइकल चलाएर देखाएका थिए। उनले फालेको प्लाष्टिकबाट डिजेल पनि निर्माण गरेका थिए।
२०७७ बैशाख १,सोमबार को दिन प्रकाशित